“Qofkii dambi loo qabto, ama lagu tuhmo, waxaa u soo istaagaysa labaatan kun oo qof oo ay isku reer yihiin” Taliye Qaal. – Radio Daljir
Febraayo 1, 2011 12:00 b 0
Galkacyo, Feb 01 – Taliyaha ciidanka bileyska ee gobolka Mudug Adam Nuur Qaal ayaa shir jaraa’id oo uu maanta kula hadlay saxaafada maxalliga ah ku sheegay in carqalada ugu weyn ee haysata bileyska iyo hay’adaha amnigu ay tahay shacabka oo ka hor istaaga bileysku in ay fuliyaan shaqadooda.
Isaga oo tafaasiil taa ka bixinaya ayaa uu sheegay in marka bileyska ay qabtaan qof, ama qof loo xiro tuhun ah in uu dambi galay ay isa suu tubayaan kumanaan qof oo ku garab taagan qofkaasi in aanu dambiga galin, walow baaritaankii aanu bileysku weli gunaanadin. Taas oo uu sheegay in bileyska uu waqti badani kaga lumo, ayna carqalad weyn ku tahay hay’adaha amniga ee qaabilsan baaritaanka dambiyada.
Md. Qaal waxaa uu uga digay shacabka in ciddii faragelin ku samaysa baaritaanada hay’adaha amniga la xiri doono, sharcigana la horgeyn doono.
Waxaa uu sheegay in badi falal-dambiyeedyada ka dhaca magaalada Galkacyo ay ka dambeeyaan kooxaha mayalka adaga ee Islaamiyiinta ah.
Shacabka ayaa uu ugu baaqay in ay gacan ka siiyaan bileyska baaritaanada iyo ka hortaga falal-dambiyeedyada ka dhaca magaalada Galkacyo.
Waxaa uu sheegay in la qabtay dadkii ka dambeeyey qarax shalay lala eegtay taliyaha ciidanka daraawiishta ee gobolka Mudug.
Mar uu ka hadlay dilkii xeer ilaaliyaha maxkamada darajada 1-aad ee gobolka Mudug ayaa uu sheegay in ay bileysku qabteen 20 qof oo lagu tuhmayo in ay ku lug lahaayeen dilka xeer ilaaliyaha, baaritaankuna uu weli socdo.
QM oo gargaar dhaqaale oo dhan $4.5 milyan ugu deegday dadka ay abaaruhu saameeyeen ee Puntland.